नेपालमा आज कति कोरोना संक्रमित थपिए ? र कतिको भयो नि,धन हेर्नुस् ताजा अपडेट – Butwal Sandesh
नेपालमा आज कति कोरोना संक्रमित थपिए ? र कतिको भयो नि,धन हेर्नुस् ताजा अपडेट
काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज थप ७१० जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण देखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न ८० वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ७१० जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो । आज देखिएका नयाँ सङ्क्रमितमध्ये महिला ३०६ र पुरुष ४०४ जना छन् । विगत २४ घण्टामा चार हजार ७८० को पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो ।
थपिएका सङ्क्रमणसँगै मुलुकभर सङ्क्रमतिको सङ्ख्या दुई लाख ५३ हजार १८४ पुगेको छ । सङ्क्रमितमध्ये ३४।५ प्रतिशत महिला र ६५।५ प्रतिशत पुरुष छन् । हालसम्म आठ हजार ८४० सक्रिय सङ्क्रमित छन् ।
आज एकै दिन एक हजार १७५ जना निको भइ घर फर्किएका छन् । अहिलेसम्म निको हुने सङ्ख्या दुई लाख ४२ हजार ५६७ पुगेको छ । नेपालमा निको हुने दर ९५।८ प्रतिशत पुगेको छ ।
सङ्क्रमितमध्ये २८३ जना सघन उपचार कक्ष र ४९ जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् । प्रदेश नं १ मा २३ जना, प्रदेश नं २ मा ११ जना, वागमती प्रदेशमा १०६, गण्डकी प्रदेशमा ७९ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ५० जना, कर्णाली प्रदेश सात जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात जना उपचाररत रहेका छन् ।
१२ को नि,धन
यसैगरी सङ्क्रमणबाट विगत २४ घण्टामा १२ जनाको नि,धन भएको छ । आज निधन भएकासहित सङ्क्रमणबाट नि,धन हुनेको सङ्ख्या एक हजार ७७७ पुगेको छ । नेपालमा सङ्क्रमितमध्ये ०।७ प्रतिशत नि,धन भएका छन् ।